इमार्टले किन्यो eBay कोरियाको सेयर – Eps Sathi
इमार्टले किन्यो eBay कोरियाको सेयर
June 26, 2021 463
दक्षिण कोरियाको रिटेलर बिजनेश इ मार्ट ले दक्षिण कोरियामा सन्चालित अन्तराष्ट्रिय कम्पनी इ बे को कोरिया ब्रान्चको करिब ८० प्रतिशत शेयर किन्ने भएको छ। कोरियामा इ मार्ट सिनसेग्ये ग्रुपले सन्चालन गरिरहेको छ। कम्पनीले बिहिवार दिएको जानकारी अनुसार ३.४ ट्रिलियन कोरियन वन अर्थात करिब ३ विलियन डलरमा इ मार्टले इ बे को दक्षिण कोरियामा रहेको बिजनेश किन्न लागेको हो।
सिनसेग्ये ग्रुपलाई इ कमर्श क्षेत्रमा अति आवश्यक परेको बिजनेश विस्तारको काम अब सहज हुने अनुमान गरिएको छ। इ बे कोरियालाई किनेपछी इ मार्टलाई रिटेल क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउन सहयोग पुग्नेछ। कोरियाको नम्मर १ रिटेल अनलाई कुफाङसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकिरहेको इ मार्टलाई यो सम्झौता पछि भने केहि सहज हुने अनुमान गरिएको छ।
इ बेले कोरिया च्याप्टरमा आफ्नो २० प्रतिशत हिस्सा मात्र कायम राखि ८० प्रतिशत बेच्न लागेको हो। इ बे कोरियाको अहिलेको मूल्याङ्कन भ्यालु करिब ३.८ बिलियन डलर रहेको बताइएको छ। इ मार्ट र इ बे कोरियाबिच यहि बर्षको अन्तिम या अर्को बर्षको सुरुवात तिर किनबेचको काम पूरा हुनेछ। किनबेचका लागि सम्बन्धित निकायहरुबाट स्विकृति लिनुपर्ने हुन्छ। स्विकृति पाएपछि किनबेचको काम पूरा हुनेछ।
यसअघि कोरियाको टेक क्षेत्रको एक प्रमुख कम्पनी नेभर कर्पोरेशनले इ बे कोरिया किन्नका लागि विडिङ प्रोसेसमा सामेल भएको थियो। अघिल्लो हप्ता आफू बिडिङबाट बाहिरिएको नेभर कम्पनीले बताएको थियो। सन २०१५ सम्ममा इ बे कोरिया देशकै सबैभन्दा ठूलो इ कमर्स कम्पनी रहेको थियो। तर सन २०१६ बाट कुफाङजस्ता इ कमर्श कम्पनी सन्चालनमा आएपछि इ बे कोरियाको प्रगतिमा ब्रेक लागेको थियो।
दक्षिण कोरियाको सन २०१८ देखि सन २०२० बिचको इ कमर्स क्षेत्रको विकास ४१ प्रतिशत रहेको पाइएतापनि यो अबधिमा इ बे कोरियाको प्रगती भने मात्र ४ प्रतिशत रहन गयो। इ बे कोरियाले अहिले जि मार्ट, अक्सन तथा जि ९ जस्ता अनलाईन प्लाटफर्म सन्चालन गरिरहेको छ। इ बे कोरिया देशकै तेश्रो ठूलो इ कमर्स कम्पनी पनि हो। सन २०२० को डाटाअनुसार इ कमर्समा यो कम्पनीले १२.८ प्रतिशत हिस्सा ओगटिरहेको छ।
Prevकोरियामा एक बर्षमै १८ लाख ६० हजार टन खिम्ची खाइयो
Nextअनमोल केसीसँग ड्रिम्स फिल्मबाट डेब्यु गरेकी सन्ध्याले गरिन विवाह
कोरियाको पासपोर्ट विश्वकै तेश्रो शक्तिशाली, नेपाल कति स्थानमा छत? जानौं।
युक्रेनद्वारा नेपालीलाई पासपोर्ट मात्रै ल्याएर भर्ति हुन आव्हान, कस्तो हुन्छ सुबिधा ?
७ नेताको मन्त्री पद खु’स्काईदिने यि २५ बर्षे युवा अधिवक्ता को हुन त?
कोरियनहरुको जिन्दगी के जिन्दगी, डि’प्रेसनको सिका’र हुनेहरुको संख्या बढ्दो